Nu am fost doar ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Imirikiti ndị ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ anaghị aga ịghọ ndị na-eguzosi ike n’ihe. Eleghị anya ha na-achọpụta ọtụtụ, ọbụna ọtụtụ narị weebụsaịtị na nke a, ị dịkwa mwute na ọ dị mfe ịchefu nke gị mgbe ha gụsịrị ya – ọ gwụla ma ị na-eso ha.
W nwere ike iche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa gị nwere mmasị. Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nu era ojiji ya, mana ọ bụrụ na ị na-ewuli ndị na-ege gị ntị na-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa blog gị, ọ pụghị ịkatọ email.
E-mail nkeere ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa ụda. N’aka nke ọzọ, e-mail na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ị gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
Na site on email, ị gaghị enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ụgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Ọ bụ ya simplu ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1.1 1 – E-mail Nwepụ
N’ụzọ doro anya, iji mee ego ọ bụla site on email gị Autoresponder, ị ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
Mana ọ bụghị naanị ndị debanyere aha ọ bụla – naanị ị chọrọ ndị debanyere aha ndị nwere mmasị na ihe ị nerew inye. Ọ dị mkpa ilekwasị anya mgbalị gị na ịmepụta listi àgwà ndị na-agụnye ndị na-ege gị ntị.
1 – E-mail Nwepụ
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta ọbụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. N’ebe a na WHSR, oricare dintre pop-urile Ninja. Nu ați făcut clic pe Ninja Popups în CodeCanyon. Anyị na-akwado OptinMonster, un WordPress ngwa mgbakwunye nu a fost ịmepụta mara mma ọpụpụ na ụdị ụdị.
Usoro a na-ewu ewu iji nweta ndeta ọzọ debanyere aha email bụ site n’inye ya freebie, dịka akwụkwọ e-akwụkwọ ma ọ bụ ozi email, nye yeị debanyere aha ọhụrụ.
Nwepu ego gị kwesịrị ịbụ kpọmkwem ihe ndị na-eleta anya gị chọrọ ibudata. Ọ bụrụ na nnwwe on gị na-adọta ndị na-egeghị ntị, ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịdebanye aha gị. Tụlee iji ndị na-agụ akwụkwọ na-enyocha ịchọta kpọmkwem ihe freebies na-adọrọ mmasị maka ndị na-ege gị ntị pụrụ iche.
Pat Flynn nke Smart Passive Venit-o în bucătărie nnukwu ego-ul nu e ego-ul site-ului n’ịkwalite Bluehost na LeadPages.
Iji chebaa e-mail cu răspuns automat, ị ga-achọ ihe ị ga-ere.
Njikọ njikọta bụ ụzọ a na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta email. Ị nwere ike iji weebụsaịtị dị ka Na-ere ahịa ịchọta njikọ mmekọ mmekọ, ma ọ bụ soro ya na ụdị ndị ị na-eji ndị nwere mmemme mmemme, dị ka gị ụlọ ọrụ weebụ.
I nwekwara ike inweta ego site n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide ego-na-enweta ị na-enweta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị zuru ezu, n’enweghị ọr a soldat.
Maka ihe kachasị ego, ye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naan n’ihi na e-mail-ul tău, la 500 de dolari în plus, arị ọrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. Gbalịa ịgbasa usoro ntanetị gị iji nye otu obere hehe 50 $.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi e-mail nke na-agụnye njirimara na-arụ ọrụ. Ha na-enyekwa ngwá ọrụ email na-mail ka ndị na-debanyere aha gị nwere ike ịnweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi email na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha mascot). MailChimp na-enye ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. Site na ngwa ngwaọrụ ha, wwere ike ịmepụta ọtụtụ ozi ịntanetị maka ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụna tinye ozi ịntanetị ka a zitere mgbe ihe ụfọdụ mepụtara (ụfọdụ mepụtara).
Ụ bụrụ na ịchọrọ ịde blọgụ ego, ọ dị oké mkpa iji wuo listi email.
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịtụbeghị oge! Site Bido na ịbanye maka ntinye akwụkwọ nhọrọ email gị, na ịdebe ụfọdụ nwepu aha na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ozugbo i nwere echiche nke ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ, wwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-ahụ n’anya.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọ n’ọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azụmahịa ndị dị.
E nereere ishe zaledwie ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Mēs vēl nekad neesam saskārušies ar ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na
단 하나 뿐인 나에 데블 렌지 "ego dị na ndepụta." 이리 키티와 그 외의